लेनदेन को विफलता पछि, सोहो चीन को शेयर 35% गिर गयो, मालिक पान शिईय अब कसरि गर्नेछ? - Pandaily
लेनदेन को विफलता पछि, सोहो चीन को शेयर 35% गिर गयो, मालिक पान शिईय अब कसरि गर्नेछ?
चिनियाँ मिडिया निर्यातएक जाँच गर्नुहोस्सोमबारमा लेखिएको थियो कि सोहो चीनको शेयरले तीव्र तल्लो खोल्यो, सम्पूर्ण व्यापारिक दिन घट्दै गयो। मिडाइको नजिकको, स्टकले 34.86% गिर्यो, प्रति शेयर HK $2.28 को शेयर मूल्य। त्यस समयमा कम्पनीको बजार पूंजीकरण 11.855 अरब हङकङ डलर (1.524 अरब अमेरिकी डलर) थियो।
हालको स्टक मूल्य गिरावट सोहो चीन र कम्पनी नियन्त्रक पान शिईय र झांग जिन युगलको अवस्थासँग सम्बन्धित हुन सक्छ।
10 सेप्टेम्बरमा, सोहो चीनले ब्ल्याकस्टोन ग्रुप र कम्पनीको बीच अधिग्रहण समाप्त गर्यो। माथि उल्लेखितब्ल्याकस्टोन समूहले बोली नगर्ने निर्णय गर्योकम्पनीको दावी प्राप्त गर्न प्रयोग भएको थियो।
यस वर्ष जूनमा सोहो चीनले घोषणा गरेको छ कि ब्ल्याकस्टोनले सोहो चीनको नियन्त्रण गर्ने अधिकारको अधिग्रहण मूल्य प्रति5हङकङ डलर प्रति शेयर, 23.658 अरब हङकङ डलरको कुल रकम एक व्यापक अधिग्रहण प्रस्ताव जारी गर्यो। यदि लेनदेन पूरा भएको छ भने, सोहो चीनले यसको सूची राख्नेछ र अवस्थित नियन्त्रित शेयरहोल्डरले 9% कायम राख्नेछ।
अब, नगद असफल भयो, स्टक मूल्य घटाइएको छ, पान शिईय र झांग जिन अब कसरी कम्पनी लिने?
वर्तमानमा, उद्योग व्यक्तिले पान शिईय युगलको विश्लेषण गरे जुन तीन सम्भावित मार्गहरू जान सक्छ। पहिलो कम्पनी निजीकरण हो। दोस्रो ठूलो बिक्री हो। तेस्रो, एकै समयमा व्यापार कोयम राख्न, एकल भवनको समग्र बिक्रीको अवसर खोज्न जारी राख्नुहोस्।
यदि जोडाले कम्पनीलाई निजीकरण गर्न छनौट गर्दछ भने, उनीहरूले दुई तरिकामा प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छन्। पहिलो, प्यान शिईय र झांग जिन निजीकरणको पूरा गर्न पुनरावृत्ति शेयरको मुख्य निकायको रूपमा सेवा गर्नेछ। अर्को तरिका विदेशी वा घरेलू लगानी संस्थाहरू खोज्न अर्को तरिका हो।
वर्तमानमा, यी दुई मार्गहरू अनिश्चित भविष्य हुन्। सबै भन्दा पहिले, पान शिईय र झांग जिन शेयर पुन: खरीद गर्न, तपाईंले पैसा उठाउनुहुन्छ।
दोस्रो, विदेशी संस्थाहरू ब्ल्याकस्टोनले सोहो चीनको सम्झौतालाई विरोधी एकाधिकार नियामक अनुसन्धान भएको छ, विदेशी लगानीको निजीकरणको सम्भावना र nbsp; यो घरेलू पूंजी निजीकरणको एक चेतावनी हो।
2012 मा, सोहो चीनले आफ्नो परिवर्तन योजना घोषणा गरे, सम्पत्ति को बिक्री मार्फत भाडा मा परिवर्तन गर्न र बजार को अवसर मा कब्जा गर्न को लागि। यद्यपि, यसको संचालनको कमजोरीको कारण, पट्टि मोडेल धेरै लामो भएको छैन, बिक्रीको सम्पूर्ण भवनको अर्को चरणको परिणामस्वरूप। 2014 देखि, कम्पनीले यसको नियन्त्रणमा धेरै भवनहरू छापेको छ।
सोहो चीनको विकासको समीक्षा, गत दशकमा उद्योग स्रोतहरूले विश्वास गर्छन् कि 2012 मा यसको परिवर्तन रणनीति गलत छैन। समस्या यो परियोजना यसको आफ्नै अपरेसनको कारण हो, पट्टे मा बजार मा कमजोर प्रतिस्पर्धा, उप-भाडा रणनीति असफलता बनाउन, एक क्लान्सन योजना मा अनुवर्ती कमी।
“वर्तमानमा, थोक बिक्रीको सडक पहिले नै यसको रूपमा योग्य छैन, र यो प्यानको अन्तिम तरिका हुन सक्छ।” उनले विश्वास गर्छन् कि “हालको मोडेल अनुसार काम गर्न जारी राख्न र अन्य इच्छुक लगानी संस्थानहरू खोज्न सजिलो छ, र त्यसपछि प्रत्येक भवन मात्र सम्पत्तिको बिक्रीको लागि प्याकेज गरिएको सम्पत्तिको रूपमा राखिएको छ। सोहो चीन हालैका वर्षहरूमा यस प्रकारको सम्पत्ति बेचेको छ, पर्याप्त आय प्राप्त गर्दछ।
वर्तमानमा, सोहो चीनको मुख्य सम्पत्ति मुख्यतः बीजिंग र शंघाईमा आठ व्यावसायिक परियोजनाहरू छन्, जसमा भाडा निर्माण स्थानको लागि कुल क्षेत्र79 7,400 वर्ग मीटर छ।
अर्को हेर्नुहोस्:Tencent ले संयुक्त राज्य अमेरिकामा जुलाई 24 मा अचल सम्पत्ति सेवा प्लेटफर्म अपरेटर शेल को समर्थन गर्दछ, 1 मिलियन अमेरिकी डलरको सूचीमा
छिटो आर्थिक पुन: प्राप्तिको साथ, कार्यालय माग बढ्दै गयो, कम्पनीले 2021 अधिवेशन दर बढ्यो। यसको आय रिपोर्ट अनुसार, जुन 30, 2021 को अनुसार, सोहो चीनको स्थिर लगानी सम्पत्तिको औसत अधिवेशन दर गत वर्ष जुन जूनमा 78% देखि90% सम्म पुनर्स्थापित भएको छ।
तर सोहो चीनको समग्र वित्तीय अवस्था अस्थिर देखिन्छ। कम्पनीले 2021 मध्यम-अवधिको आयोजकले बताएअनुसार अन्तिम अवधिको अन्त्यमा कुल 18.47 बिलियन युआन ऋण, जसको लगभग 10.12 बिलियन युआन अर्को वर्षमा, अर्को दुई वर्षमा 1.66 बिलियन युआन हुन्छ। यसको शुद्ध सम्पत्ति ऋण अनुपात लगभग 43% हो, औसत उधार लागत लगभग 4.7% छ।